Afar arrimood oo waaweyn oo todobaadkan dunida kusoo fool leh - BBC News Somali
Afar arrimood oo waaweyn oo todobaadkan dunida kusoo fool leh
Todobaadkan waxaa dunida kusoo fool leh dhacdooyin waaweyn oo warbaahinta adduunka xiiso gaar ah u yeeli doona.
Kaliya ma ahan muhiimadooda, ee sidoo kale baaxadda ay leeyihiin iyo saameynta ay yeelan karaan dhacdooyinka caalamka.
Haddaba afar ka mid ah arrimahaas oo jadwalaysan
Dhismaha cusub ee quruxda badan # 1
Garoonka diyaaradaha cusub ee Istanbul ayaa si buuxda loogu furi doonna dadweynaha maalinta Axadda. Waxa uu noqon doonaa mid isku xira illaa 300 goobood oo adduunka ah , waxaana ku yaalaa illaa 500 goobood oo dadka ay ka gudbi karaan halmar.
Qeybta la dhigto baabuurta, waxa ay markiiba qaadi kartaa 40,000 baabuur.
Haddii qorshahaan lagu guulaysto, kani wuxuu noqon doonaa madaarka ugu mashquulka badan ee adduunka.
Ugu horreyntii, hawlaha kala wareega ah (Gashiingalka) ee ka socda magaalada uu hadda ku yaallo garoonka, Ataturk Airport, balse waxaa loosoo wareejin doonaa garoonkan oo noqonaya meel bar-kulan u noqon doonta gaadiidka cirka ee adduunka.
Najib Razaq oo laga mamnuucay in uu ka baxo Malaysia
Rai'sul wasaarihii hore ee malaysia oo xabsiga loo taxaabay
Madaarka diyaaradaha ee Istanbul ayaa awoodi doona in ay maareeyo 90 milyan oo rakaab ah marka 2021, waana lasii balaarin doonaa illaa la gaarsiiyo 200 milyan oo qof.
Taasi waxay noqoneysaa mid ku dhow laba jibbaar baaxadda garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee ugu mashquulka badan aduunka Atlanta 2017.
Laakiin maddaarku ma uusan aheen mid aan khilaaf dhalin oo waxa ku dhimatay ugu yaraan 30 shaqaale ah intii lagu jiray dhismahiisa .
2) Maxkamaddii labaad ee lagu qaado ra'iisul-wasaarihii hore ee Malaysia, Najib Razak
Arbacadii, ra'iisul-wasaarihii hore ee Malaysia, Najib Razak, ayaa maxkamad la saarey wuxuuna ku eedaysnaa musuqmaasuq ku lug leh dhaqaalaha sanduuqa maalgashiga ee 1MDB. Waxa uu wajahayaa eedaymo ay ka mid yihiin jebinta kalsoonidda, taas oo uu dafiray .
Lacagaha lagu eedeynayo in uu lunsaday waa tiradii ugu badneyd ee taariikhda lacag la lunsado.
Sida laga soo xigtay dacwad oogayaasha Mareykanka iyo Malaysiya, lacagta loogu talagalay in lagu caawiyo dadka reer Malaysiya ,ayaa waxaa gacanta ku dhigay shaqsiyaad yar oo awood leh .
Tani waa markii ugu horeysay ee qof masuul ah maxkamad loo saaro fadeexad dhacday awgeed - qofka maxkamadda la saarayna waa ninkii hore dalka Malaysiya taladiisa hayay.
Tani waxay noqon laheyd usbuuc dhamaystiran oo UK aanay ka mid ahaan lahayn Midowga Yurub, laakiin 29ka Maarso Brexit ayaa dib loo dhigay todobaadkii hore. Tani waxay ahayd inay u oggolaato baarlamaanka UK waqti dheeraad ah oo ay ku heshiiyaan shuruudaha ka baxista EU(Midowga Yurub) -da.
4) dhismaha cusub ee quruxda badan #2
Kooxda Tottenham Hotspur ayaa ciyaari doonta kulankoodii ugu horeeyay ee garoonkooda cusub ee waqooyiga London Arbacada.
Waxay xilli cusub u tahay mid ka mid ah kooxaha ugu waa weyn Premier League. Waxaana ayna gali doonaan sida uu macalinkooda sheegay "mid ka mid ah garoomada ugu fiican adduunka".
Garoonka waxa uu qaadaa 62,062 taageerayaal ah, taasoo ka dhigeysa kooxda ugu weyn horyaalka ee London, waxaana la furayaa ka hor kulanka ugu weyn ee isbuuca soo socda ee Spurs: ciyaarta kama dambeysta ah eeChampions League ee Manchester City.
Hase yeeshee, ka hor intaan la ciyaarin, waa kulankii ugu horeeyay ee ciyaar rasmi ah ay ka dhacdo garoonka Crystal Palace habeenka Arbacada ee soo socda .
Hal shay oo gaar ah ayaa u muuqata in ay soo jiidatay dareenka dadka: habka cajiibka ah ee khamriga iskiis isku shubayo ayadoo la isticmaalayo bir qabato ...